सेभिलबाट सर्वश्रेष्ठ भ्रमण यात्रा समाचार
सेभिलबाट सर्वश्रेष्ठ भ्रमण
मारिएला क्यारिल | | सुझावहरू, sevilla
सेभिल स्पेनको एक धेरै पर्यटन र सुन्दर गन्तव्य हो। यदि तपाई यस शहरको भ्रमण गर्नुहुन्न भने देशको भ्रमण सँधै अपूर्ण हुनेछ। नगरपालिका, शहर र राजधानी एकै समयमा Andalusia मा सब भन्दा अधिक जनसंख्या भएको शहर र EU मा एक भन्दा बढी जनसंख्याको शहर हो।
यूरोपियन पुरानो शहरहरूमा यो सब भन्दा ठूलो र सब भन्दा सुन्दर छ त्यसैले त्यहाँ हेर्न धेरै नै छ। तैपनि, यो सँधै भ्रमणको लागि यात्रा गर्न सुझाव दिइन्छ, त्यसैले यस पोष्टको बारेमा यही हो: सेभिलबाट सर्वश्रेष्ठ भ्रमण।
1 जेरेज डे ला फ्रन्टेरा
4 आर्कोस डे ला फ्रन्टेरा
जेरेज डे ला फ्रन्टेरा
यो एक अन्डालिसिया नगरपालिका र शहर हो जुन कास्टाइल र ग्रानडाको नासिड राज्यको बीचमा यसको पुरानो स्थानबाट यसको नाम प्राप्त गर्दछ। यो एट्लान्टिकबाट दस किलोमिटर मात्र टाढा छ पहिले नै जिब्राल्टरको स्ट्रेटबाट लगभग 80०
यसको प्रतीकहरू हुन् मोटरसाइकल रेसि,, फ्लेमेन्को, घोडा र रक्सी। वा विशेष गरी शेरी। यो धेरै ईतिहासको क्षेत्र हो किनकि त्यहाँ धेरै संस्कृतिहरू आएका छन्, फोनिसियनहरू, रोमीहरू र उनीहरू बीचमा मुसलमानहरू। यसैले त्यहाँ धेरै चर्च र सभा र धेरै १ many औं शताब्दीका दरबारहरू छन्। केही ऐतिहासिक भवनहरू संग्रहालयहरूमा परिणत भएका छन् र त्यहाँ अरू संरचनाहरू छन् जुन भ्रमण गर्न योग्य छन् ओल्ड टाउन हल, वाल वा अल्काजार.
एक पटक आवश्यक भ्रमणहरू गरीएको छ ऐतिहासिक हेलमेट र वरिपरि तपाईं केही गर्न रोक्न सक्नुहुन्न वाइन टूर। जेरेज डे ला फ्रन्टेरामा त्यहाँ धेरै वाइनरी छन्, बहुमूल्य पनि। त्यहाँ धेरै निजी भ्रमणहरू छन् जसमा वाइन र खाना चाख्ने सामेल छन्। गणना गर्नुहोस् कि सब भन्दा महँगो कर सहित २ with० यूरो हुन सक्छ।
तपाईको भ्रमण गर्ने बर्षको समय अनुसार तपाईले चाडपर्वहरू रमाइलो पनि गर्न सक्नुहुनेछ फसल, केहि संरक्षक संत महोत्सव, फ्लेमेन्को फेस्टिवल, मोटरसाइक्लि award पुरस्कार वा उही क्रिसमस जुन यहाँ वरिपरि विस्मयकारक छ। र म एक वा दुई रात राख्ने छुaफ्लेमेन्को कार्यक्रम केही चट्टानमा।
के यो तपाईलाई अरु देखिन्छ? हैन, AVE उच्च-गति ट्रेनको साथ तपाईं केवल minutes 45 मिनेटमा आइपुग्नुहुन्छ। यद्यपि मेरो लागि कर्डोबा अधिक समयको योग्य छ, तपाईं भ्रमण धेरै सुरुमै सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र राती वा दिउँसो फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
कर्डोबा एक महान शहर हो र यसको ऐतिहासिक केन्द्र १ 1994 XNUMX since देखि विश्व विरासत साइट भएको छ। यसैले हेर्नु पर्ने मस्जिद, पुएन्टे रोमानो, रोमन मसोलियम, एम्फीथिएटर, फोरमहरू, के बाँकी छ सम्राट म्याक्सिमियन हर्कुलियनको दरबार वा शहरको पुरातात्विक र जातीय संग्रहालय अन्तर्गत लुकेका थिएटर।
कोर्डोबाको यहूदी विरासत अझै पनि यसमा बसोबास गर्दछ सेपाराडको घर वा सभाघर र क्रिश्चियन धर्ममा हामीसँग पुरानो छ ईन्क्वीजेशनको मुख्यालय र Alcánzar de लॉस रेस। वास्तवमा, यहाँ कर्डोबामा सबै कुराको अन्त हुन्छ, रोमन, मुस्लिम र क्रिश्चियन र यहूदी। त्यसोभए यहाँ खलीफाट बाथहरू छन्, त्यहाँ रोयल अस्तबलहरू छन्, पुरानो रोमी पर्खालका साथ आफ्ना केही नयाँ ढोका, टावर र किल्लाहरू र त्यहाँ चित्रमय वर्ग जुन डन क्विक्सोटमा देखा पर्दछ।
यदि तपाईंलाई चर्चहरू मनपर्दछ भने कुनै एउटामा जान सक्नुहुन्छ १२ फर्नान्डिने चर्चहरू, १ern औं शताब्दीमा शहर पुनः कब्जा गर्दा फर्नांडो III एल सान्तो द्वारा आदेश। तिमीलाई मनपर्यो भने मिलहरू यो धेरै हेर्न को लागी Guadalquivir को किनारमा पैदल यात्रा लायक छ।
त्यहाँ केही बगैंचाहरू पनि छन्, केही पुलहरू विरासतको साथ र कोर्डोबाको वरपर पुरातात्विक जटिल मदिना अज़ाहारा, लगभग Granana मा Alhambra जस्तै सुन्दर।
यो युरोपको सब भन्दा पुरानो शहर हो यसको उत्पत्ति लगभग ११०० वर्ष ईसापूर्व पत्ता लगाउन सकिन्छ किनकि यो फोनिसियनहरू द्वारा स्थापना गरिएको थियो र यो सेभिलबाट १२124 किलोमिटर टाढा छ। यद्यपि यो पर्यटनबाट टाढा रहदैन, यो एक धेरै भ्रमण गरिएको शहर हो किनकि योसँग एक महान ऐतिहासिक धरोहर, महान समुद्र तटहरू र केही धेरै प्रसिद्ध कार्निभलहरू छन्।
डेल रोमन विगत थिएटरको भग्नावशेष बाँकी छ जुन २० औं शताब्दीको s० को दशकमा लगभग संयोगले फेला पर्‍यो। फोनिशियन भूतबाट हो Gadir जम्मा, सडकहरू र घरहरूको सजावट यसमा कसरी देख्न सकिन्छ भनेर अत्यन्त मूल्यवान छ। त्यसोभए त्यहाँ चर्चहरू, स्थानीय कुलीनहरूको दरबारहरू, समुन्द्रलाई हेरेका महलहरू, बगैंचाहरू र मैले मुठ्ठीभर राम्रा सुनहरी शहरी तटहरू माथि भनें।
Cádiz भ्रमण गर्न राम्रो समय कार्निवल हो यो देश मा एक सबै भन्दा लोकप्रिय हो र विश्व पर्यटक चासो को घोषणा गरीएको छ। बिभिन्न समूहहरू एक सय भन्दा बढी बर्षदेखि एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् र तपाई जहिले पनि फ्लोट्स, मास्क, पोशाक, मास्क र कन्फेटी देख्नुहुनेछ। भोज!
यो शहर बाट एक घण्टा भन्दा कम छ sevilla, Gaudelete नदीको उपत्यका माथि एक अग्लो चट्टानमा। हाम्रो बाँकी गन्तव्यहरू जस्तै शताब्दिको इतिहास छ र धेरै मानिसहरू आफ्नो पैतृक सम्पत्ति छोडेर तिनीहरूको भूमि भएर गए।
मुडेजर संस्कृतिबाट हामी एउटा पुरातन मन्दिर देख्न सक्छौं जुन बनियो सान्ता मारिया डे ला असुन्सिनको चर्च वा Aguila को गणना को महल चौधौं शताब्दी देखि डेटि।। शहरको माथि कास्टिलो डे आर्कोस उठ्छ, जुन आगन्तुकहरूको लागि खुला छ।
यो यो सेभिलबाट सब भन्दा नजिकको यात्रा हो किनकि तपाईं बस चढ्नुहुन्छ र आधा घण्टामा आइपुग्नुहुन्छ अरू केहि हैन। तपाईं बिहान जान सक्नुहुन्छ र दिउँसो पछि फिर्ता आउन सक्नुहुन्छ वा सिधा खाजामा जान सक्नुहुन्छ।
यो एक शहर हो साँघुरो सडक र धेरै गल्लीहरू तर केहि "ताराहरू" संग: त्यहाँ छ अल्काजार डेल रे डोन पेद्रो वा रोमन नेक्रोपोलिस, उदाहरण को लागी, वा अरब दुर्ग। १ 70 s० को दशकदेखि अल्काजार एक राष्ट्रीय प्याराडोर भएको छ, यो जान्न लायकको छ।
यहाँको दर्शनीय भ्रमण नेक्रोपोलिसको रोमन भग्नावशेष, यसको चिहानहरू, रोमन ब्रिजका अवशेषहरू, एम्फीथिएटर र Via Augusta को अवशेष। भित्तामा ढोकाहरु पनि आकर्षक छन्, विशेष गरी पुर्टा डे सेविला, जो अल्काजार शैलीमा सुदृढ गरिएको छ। एउटा चर्च थप्नुहोस् र तपाईंसँग पूरा यात्रा छ।
अन्तमा त्यहाँ रोन्डा छ, कारबाट दुई घण्टाको दूरीमा वा सिभिलबाट बस वा रेलमा तीन घण्टा। यो एक सानो शहर हो जुन एक धारा र एक मुट्ठी पुलहरू द्वारा विभाजित छ। यो एक शहरको लागि पनि चिनिन्छ बुलफाइट
रोन्डा वरिपरि घुम्न यो ध्यानमा राख्नको लागि सुविधाजनक छ यो तीन छिमेकमा विभाजन गरिएको छ: सब भन्दा पुरानो Alcázar को हो, त्यहाँ स्यान फ्रान्सिस्को छिमेक र अन्तमा मर्काडिल्लो छ। पहिलो पनि भनेर चिनिन्छ सहर र यो जहाँ तपाईं पुरानो दरबार, संग्रहालय, चर्चहरू देख्नुहुनेछ। स्यान फ्रान्सिस्कोमा अरबी पर्खाल, अरब स्नान र सुन्दर सान फ्रान्सिस्को कान्वेंट छ जहाँबाट यसको नाम लिइन्छ।
एल मर्काडिल्लो रोन्डाको सब भन्दा आधुनिक अंश हो। यहाँ छ बुलरिंग, संसारको सब भन्दा पुरानो हो र प्रसिद्ध Calle de la Bola, एक किलोमिटर लामो र पसलहरू द्वारा घेरिएको।
सेभिलबाट छ वटा भ्रमण। अब, तपाइँ छनौट गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » स्पेन शहरहरू » sevilla » सेभिलबाट सर्वश्रेष्ठ भ्रमण